Kukhona izimoto okuyinto, nakuba ningabi cult, kodwa bafanelwe yinhlonipho ngenxa amakhono ayo. Isici lesi sigaba of Suv. Omunye imoto sinjalo Nissan Terrano 2. Melika it is njengoba Pathfinder eyaziwa, kulo lonke izwe njengoba Terrano. Nakuba isizukulwane sokuqala imoto wabonakala ngo-1986, umshini kushintsha njalo, manje emigwaqweni crisscrossing isizukulwane sesithathu wonke amasondo imoto ngaphansi kwalesi brand.
Terrano kuyinto ngawo wonke amasondo imoto ngempela. isiqinisekiso Direct kwalesi sitatimende isakhiwo Uhlaka imoto. Little manje kusele jeeps, kahle njengoba abanqobi of off-road, okungase uqinisekise izimangalo zakhe lokhu ingxabano, njengoba uzimele. Futhi empeleni inikeza ukuqina kanye ukuphepha imoto uma ushayela ku ezindaweni ezimbi. Ngu ukunyakaza okunjalo Nissan Terrano 2 uhlale ekulungele.
Nissan Corporation ochwepheshe eminingi ekuklanyweni izimoto off-road. Futhi okuhlangenwe nakho okunje lishumekwe Nissan Terrano 2, izici lobuchwepheshe zazo enze kube nokwenzeka ukuba sinqobe izithiyo ezinkulu lapho ihamba. Plug-in front-wheel drive, Splitter, esinomkhawulo ukushelela diff, a okwanele phansi imvume - konke lokhu kuvumela naye ngenkathi ushayela ukuze unqobe cishe noma isiphi isikhubekiso endleleni yayo.
Futhi uma sifaka kule le oluvala amasondo ezingemuva (hhayi ukusika) kwi iziphethu, uthola imoto okuyiwona komgwaqo futhi akudingeki isiqondiso ngokwanele. Ngaphambili ukumiswa kuyinto ezimele, ukuze imoto Ungahambisa ngokukhululekile emigwaqweni futhi edolobheni phezu kwendawo egandaywe ngamatshe. It uhlala ukuze ungeze ukuthi amabhuleki front (disc) umoya, bakhulise - sigubhu. Umzimba kusuka Nissan Terrano 2 kungaba ngendlu ezinhlanu amathathu- noma.
Imoto kungenziwa ifakwe diesel likaphethiloli injini kanye ne-transmission ngokuzenzekelayo noma mathupha. Kukhethwa izinjini ezinkulu udizili ngokwanele ku ezintathu noma 2.4 litre uphethiloli 3.5 futhi 3.3 amalitha. Naphezu abalulekile amandla izinjini, imoto libhekene anda ukushayela Dynamics, kodwa sezimoto kugcinwa beqiniseka kakhulu.
Abashayeli Nissan Terrano 2 Izibuyekezo lona omuhle kakhulu. Ithi a throughput omkhulu, ukusebenza kahle futhi waba nokwethenjelwa. Ngokucacile okukhulunywa kungenzeka eliyifa, uma kunesidingo, ukulungisa ekhaya, kuhlanganise emkhakheni, kanye ukusetshenziswa izingxenye kusukela izimoto ezahlukene.
Ngokuhambisana isicelo main njengoba imoto imoto amasondo, ngale ndlela, utilitarian kanye emakhazeni amisiwe. Simple, akukho frills, kodwa ergonomic, wonke ayese sizikhandle futhi ezindaweni zabo. Umshayeli esinikezwa naleli okusezingeni eliphezulu zihlalo isikhundla futhi ukubonakala okuhle. Ngokusho ukubuyekezwa, Yini embi ngalo iyona ukuntuleka emakhono zonke izinhlobo zezinto ezincane gumbi.
Uma uzama ukuchaza Nissan Terrano 2 amagama ambalwa, singasho ukuthi unemoto enokwethenjelwa, ezongayo wonke amasondo. Ungase ngisho bakubiza multi-functional nesingakhangi. permeability Excellent emvumela ukuba ukushayela kunoma yimuphi umgwaqo emvelweni, futhi ngesikhathi esifanayo akubukeki "izimvu black" sezimoto.
I-Volkswagen New Beetle: imininingwane, incazelo nokubuyekeza
Indlela Yokulungisa Imoto Ngayo Uhambo Olude?
Simple Crochet: igqokela abesifazane nge izikimu
Indlela Yokwenza Imali GTA 5: igxathu negxathu Umhlahlandlela